Service Expat, 4288 Aspire Rama 4, Phrakanong, Klong Toey, Bangkok (2021)
- Visa, Work Permit, 90 Days Report Service for expats in Thailand
- Document Legalization by Foreign Affairs
- Vehicle License extension
ShareLike is founded by Triump Technology Co.Ltd, headquarter, in Bangkok. Triump Technology aims to create ecosystem of restaurants, hotels, and consumers for exchanging goods and services in the way that is beneficial to all parties.
We are the world : Cover Song (Haiti Version)
Cover song for Crisis in MyanmarMyanmar has been struggling with civil unrest since military coup on 1st February 2021 and people are protesting against dict...
5 Reasons why you should live in Thailand
There are many great things about Thailand and these are my take from 8 years of experience in the land of smile. 1. Culture2. Food3. Beautiful Places4. Inex...
Covid 19 Status in Thailand
One Stop Service for Foreign Expats in Thailand
One Stop Service For All Your Needs in Thailand
DON'T invest in bitcoin before you watch this !!!
Bitcoin is the cryptocurrency built on revolutionary blockchain technology and the price of bitcoin has increased significantly since its inception in 2008. ...
CRPH ရဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအောင်မြင်ဖို့ ပူးပေါင်းကြပါစို့
ပြည်သူလူထုက တရားဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်မှ မတရား ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း၍ တရားမဝင်အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှ စတင်၍ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်‌ရေး အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး မျိုးဆက်သစ်များက ‌"နွေဦးတော်လှန်ရေး" ဟု အမည်နာမ သမုတ်ခဲ့ကြသည်။ ‌
(၃)ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ (CRPH)
ထိုကဲ့သို့ ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် CRPH အနေဖြင့်လည်း ပြည်သူနှင့် တသားတည်းရှိပြီး ပြည်သူ၏ ဆန္ဒများအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် အလှူငွေများ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် CDM လုပ်ဆောင်နေသောဝန်ထမ်းများအား ကူညီနိုင်ရေး အပါအဝင် CRPH ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လည်ပတ်ပြီး နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက် (၄) ရပ်ကို ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်‌ရေး အတွက် အလှူငွေများကို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းမှ တဆင့် ဤအလှူခံစာမျက်နှာတွင် ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
သို့မဟုတ် CRPH ၏ အင်တာနက် ပင်မစာမျက်နှာ
ရှိ “Donate” ခလုတ်အားနှိပ်၍လည်း လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူများ အားလုံး၏ အနာဂတ် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကို ပြောင်းလဲသွားစေမည့် ဤအလှူတွင် မိတ်ဆွေများ အားလုံးမှ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ကူညီနိုင်ကြပါရန် နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
On 1st February 2021, the Myanmar military unjustly seized the sovereign power of the state by staging the coup d’état in violation of the existing laws. The military has illegally detained the democratically elected government leaders, President U Win Myint, State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, and the government officials, together with the elected parliamentary members and pro-democracy activists.
Thenceforth, people across the country took to the street, protesting peacefully to reject the military coup and the military dictator, which ultimately gave birth to the “Spring Revolution” led by the young generation of Myanmar, known as Gen Z (Generation Z).
To this extent, the People, Civil servants, and Elected Government concurrently joined hands in unity to stand against the military dictatorship, supported by the three pillars, namely:
1. Continuous Protests Nationwide,
2. Civil Disobedience Movement (CDM), and
We all witnessed the incredible strength of the unity in people and we can see the dawn of our victory within reach.
In this spirit, we urge all our fellow citizens of various ethnicities and nationalities to take this significant and great opportunity, join hands to uproot the military dictatorship system from our country for good, and to achieve our common goal, “the Federal Democratic Republic" for the people, of the people and by the people.
Together with the people and to fulfill the will of the people, CRPH has been working restlessly in all possible ways to implement its (4) political visions and other responsibilities, including supporting CDM. We are in need of funding and for those who want to support us to strengthen our work, you can help by donating through “Pyi Thu Gon Yee (Citizen of Burma Award Organization Inc)” here:
Or, by clicking “Donate” button on CRPH Myanmar homepage: https://crphmyanmar.org
Your contribution will change the future of Myanmar for centuries to come.
Please help us to help our people and beapart of it.
Do we have to watch our people being killed like this? This is notacivil war! I respectfully beg and request to the world leaders again and again, please, help my people.
รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Service Expatผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา
ส่งข้อความของคุณถึง Service Expat: